Amakamelo okulala e-Casa Taj angu-9 - Umpheki noMaid bafakiwe.
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Britta
U-Britta unokuphawula okungu-71 kwezinye izindawo.
Izivakashi zizolala ngokunethezeka emakamelweni okulala angu-9 anamagumbi okugezela agcwele angu-9 nangu-2. Ikhaya lingalala izivakashi ezingafika kwezi-26 kusetshenziswa ama-Futon ama-Four. Izindleko ezengeziwe ziyasebenza ezivakashini ezingaphezu kuka-18. Wonke amagumbi okulala ane-air-conditioning ngamanye. Ikhishi okudlela kulo, elinezibali ze-marble-top, lifaka indawo yokudlela yasekuseni futhi lihlome ngokuphelele ngezinto zesimanjemanje. Indawo yasekuseni nayo iyindawo ethandekayo yokujabulela ukubukwa futhi umpheki otholakalayo anganikeza ukudla kwasendaweni okumnandi ngoMsombuluko kuya ngoMgqibelo.
Ihlotshiswe ngokunaka okucophelelayo emininingwaneni ngesitayela se-Spanish Colonial, le ndawo enhle yokulala enamakamelo angu-9, nezindawo zokugeza ezingu-9½ eziseduze nolwandle ilala izivakashi ezingafika kwezi-26 endaweni engaphezulu kuka-8,200-square-square.
Ihlanganiswe nesakhiwo sayo sakudala sase-Spanish Colonial, i-Casa Taj inikezela ngamamitha-skwele angama-2000 ovulandi abamboziwe, abazungeza indlu, abanezihlalo eziningi. Lapha ungakwazi ukuphumula ngempela kule ndawo emangalisayo ogwini lwasePacific futhi ujabulele ukushona kwelanga okumibalabala kwakusihlwa. I-pool terrace ebolile enezihlalo zokuphumula ezintofontofo ixhumene nechibi lesitayela sechweba futhi inikeza indawo ekahle yokuphumula, ukungenisa ilanga, nokujabulela ubukhazikhazi baseCosta Rica.
Lo mbungazi unokushiwo abanye okungu-71 kwezinye izindawo zokuhlala. Veza okunye okushiwo abanye
Sinikeza ithimba le-concierge eligcwele inkonzo yokuvakasha kwakho, izinkambo, amamasaji, njll.